बेलायतस्थित स्वास्थ्यकर्मी तथा एनआरएन अभियन्ताले गरे डा केसीको जीवन रक्षाको माग – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ बेलायतस्थित स्वास्थ्यकर्मी तथा एनआरएन अभियन्ताले गरे डा केसीको जीवन रक्षाको माग
बेलायतस्थित स्वास्थ्यकर्मी तथा एनआरएन अभियन्ताले गरे डा केसीको जीवन रक्षाको माग
जीएनएन असोज २१, २०७७ गते २१:०४ मा प्रकाशित
लन्डन– बेलायतमा कार्यरत नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुले चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै १९ औं पटक आमरण अनशन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।
यसै गरी नेप्लिज नर्सेज़ एशोसिएसन यूकेका अध्यक्ष विनोद विकास सिम्खडाले डा. केसीको स्वास्थ्य रक्षाको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । “गोविन्द केसी समानताको लडाईं लडिरहेका छन् । पटक-पटक अनशन अनि लिखित सम्झौता भएपनि एकै किसिमको माग राखेर लडिरहनु पर्ने स्थिति आउनु बिडम्बना हो । समानताको कुरा गर्ने, तर जनस्वास्थ्यका लागि जायज माग राखेर लडिरहेका केसीको माग सुने जस्तो गर्ने तर कार्यान्वयन नहुनु निन्दनीय छ,” सिम्खडाले भने।
गैर आवासीय नेपाली संघको १३ औं युरोप बैठक तथा दोश्रो ज्ञान सम्मेलनको समापनको अवसरमा भर्चुएल माध्यमबाट आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले डा. केसीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। उनले केसीका मागहरुप्रति प्रतिबध्दता पनि जनाए।